मौलिक गीत संगीतमा नै मौलिकता छ ; संगीतकार डि आर अटु – Ramro Sandesh मौलिक गीत संगीतमा नै मौलिकता छ ; संगीतकार डि आर अटु – Ramro Sandesh
काभ्रेपलाञ्चोक, नेपाली मौलिक पूर्वेली लोक गीत संगीतको क्षेत्रमा स्थापित संगीतकारको रुपमा रहेका छन संगीतकार डि आर अटु । १ दशक वर्षभन्दा लामो समयदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय रहेका संगीतकार डि आर अटुका चर्चित पुर्वेली लोक गीतहरु क्रमश दिक्तेल बजार , गुडि जाने रेल , घाम छायाँ , झुम्के माया , नौ लाई सुन्ना नब्बे , माया हजुर , माथी है पर्यो , दिक्तेल बजार २ , हिडि जाने बटुवा , माथी माथी हिमाली भेगमा , सोल्टिनी ज्यु जस्ता मौलिक एवम नेपाली पन बोकेका भाकाहरु बजारमा ल्याएका छन ।
मौलिक लोक सस्कार र सस्कृतिलाई संरक्षण गदैँ गीत संगीतमा मौलिक भावहरुलाई आम दर्शक तथा स्रोताको मनमा बस्न सफल भएका छन । पछिल्लो समय कला क्षेत्रमा मा समेत सक्रिय रहेका संगीतकार डि आर अटुसँग नव क्षितिज साप्ताहिकको लागी अरविन्द गौतमल गरेको बिशेष कुराकानी
तपाईको सांगीतीक यात्रा कसरी सुरुवात भयो ?
मेरो सांगीतीक क्षेत्रको करिएर पहिला स्कुले जिवनमा भाग लिने गर्थे । पछि काठमाण्डौं बसाई पछि विस्तारै संगीतको मोहले तान्दै गयो । त्यसै पछि नै मेरो सांगीतीक यात्राको सुरुवात भयो ।
तपाईको कुन कुन गीत चर्चामा रहन सफल भए ?
दिक्तेल बजार , गुडि जाने रेल , घाम छायाँ , झुम्के माया , नौ लाई सुन्ना नब्बे , माया हजुर , माथी है पर्यो , दिक्तेल बजार २ , हिडि जाने बटुवा , माथी माथी हिमाली भेगमा , सोल्टिनी ज्यु गीतहरुमा आफनो संगीतको कला प्रस्तुत गरे जसको कारणले आम दर्शक तथा स्रोताको नजरमा अगाडि आएको छु ।
लक डाउनमा दिनहरु कसरी बिताइरहनु भएको छ ?
लकडाउन भन्ने बित्तिकै प्रायःलाई घरभित्रै बस्ने भन्ने चिन्ता, एकोहोरोपन, नकारात्मक सोच पलाएको छ । व्यक्ति अनुसार सोचाइ, माहौल, परिस्थिति बेग्ला–बेग्लै हुन्छ । म लकडाउनलाई सकारात्मक सोचेर, ज्ञान–ज्ञुनका कितार पढेर, सृजना गरेर, सरसफाइ गरेर, साथै लकडाउनको सदुपयोग गर्दै केही नेपाली सुगम साथै अन्य भाषाभाषीको गीतको संगीत संयोजनमा ब्यस्त रहेको छु । साथै नव एवम पुराना अग्रज व्यक्तिहरु, साथीभाइ, सर्जकहरुसंग कुरा गर्दै विगतलाई ताजा बनाउँदै छु ।
लक डाउनका ती तीन सातामा सिर्जनात्मक कामहरु के के गर्नु भयो ?
यो समयमा मैले आम नेपाली संगीत अनुरागी दर्शक तथा स्रोताको मनमा बस्न सफल हुने किसिमका गीतको संगीत भर्दै छु भने । एक भिन्न तरिकाबाट को लकडाउनको समयलाई विताइरहेको छु।
सिर्जनात्मक काम बाहेक अरु के के गर्नु भयो ?
सिर्जनात्मक काम बाहेक आफुलाई मैले मनपर्ने नेपाली एवम विभिन्न भाषा भाषीका चलचित्रहरु हेरें । मन पर्ने गीतहरु सुनें । साथीभाइसंग अनलाइनमार्फत कुराकानी गरें । विदेशमा रहनु भएका आफन्त, साथीभाइसंग कुराकानी गरें । यसरी नै समय विताइरहेको छु ।
लकडाउनका राम्रा पक्ष चाहिं के–के अनुभव गर्नु भयो ?
जिन्दगी एक चोटिको हो, त्यसैले सकारात्मक मात्र सोच्न सकियो । जिन्दगी सरल तरिकाले जिउनु पर्छ भन्ने पाठ सिकायो ।मानिसलाई केही चुनौतीको सामना गर्नको लागी थप प्रभावकारी भएर लाग्नको लागी सहयोगी बन्यो । सबै एक हौं भन्ने सकारात्मक पक्ष । मिठो भन्दा पनि स्वास्थबर्द्धक खानपिन राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा सिकायो । आफू बाचौं, अरुलाई पनि बचाऔं भन्ने मूलमन्त्र सिकायो ।
अनि नराम्रा पक्षहरु नि ?
बिहान–बेलुका काम गरेर छाक टार्नु पर्ने मजदुरहरुलाई पीडा, आफ्नै देशको सिमानामा आएर पराइको देशमा बस्नु पर्ने पीडा, मानवता बिर्सिएर यो दुखद घडीमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, नचाहिदा अनि हुदै नभएको, त्रास मात्र फैलाउने केही मिडिया, व्यक्तिहरुको कारण जनतालाई पीडा, मिडियाकर्मी, स्वास्थकर्मी, सुरक्षकर्मीहरुले जोखिम मोलेर काम गर्नु परिरहेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न के के गरिरहनु भएको छ ?
सबैभन्दा पहिला त विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनहरुलाई हामी सबैले अनिवार्य रुपमा पालना गरेको छु । यसबाहेक खानेकुराहरु राम्ररी पखालेर, पकाएर खाइरहेको छु । घरबाट बाहिर निस्कनु पर्दा मास्क, पञ्जा लगाएर मात्र निस्कन्छु, साबुन पानीले हात धुने कुरामा सजग छु ।
तपाईका आगामी योजनाहरु के के छन् ?
मेरो आगामी योजना भनेको बिभिन्न चर्चित गायक गायिकाको स्वरमा नयाँ गीत बजारमा ल्याउने तयारीमा छु । जुन एल्बमको रेकडिङ्ग कार्य जारी छ । आशा छ सबैले मन पराईदिनुहुने छ ।
हालको सांगीतीक क्षेत्रको बारेमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
नेपाली सांगीतीक क्षेत्रमा बिना प्रशिक्षण एल्बम् निकाल्ने लहर चलेको छ र बिभिन्न खालका छाडा प्रबृतीका गीतहरु बजारमा आईरहेको देखदा मलाई चित्त बुझेको छैन । यसो गर्नु भनेको बिकृती हो । दर्शक श्रोता महानुभावहरुले पनि राम्रो नराम्रो कस्तो छ गीत छुट्याएर राम्रो गीतलाई माया गरिदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु ।
संगीतमा साधना गरिरहेको छु । हजुरहरुकै मायाले म टिकेको छु र साथ सपोर्ट, सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला । मेरा गीतहरुलाई माया गरिदिनु होला यही भन्न चाहन्छु ।